မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့် Dopamine (D2) Receptor Levels (၂၀၀၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
စွဲလမ်းနှင့် Dopamine (D2) receptor Levels (2006)
comments: မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု dopamine အတွက်ကျဆင်းမှု (D2) receptors ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပြပထမဦးစွာလေ့လာမှု။ အရေးကြီးစွဲစွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းငှါအရာထိုကဲ့သို့သော receptors တစ်ဦးအနိမ့်နံပါတ်, ရကြပြီ။ ဒါ့အပြင် receptors ပြန် bounce နိုင်သည်ကိုပြသပေမယ့်နှုန်းကိုအခြေခံ D2 receptors နှင့်ဆက်စပ်သောအလွန်အမင်း varaible နှင့်မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုကင်းအလွဲသုံးမှုနှင့် receptor Levels: ပေ Imaging က Link ကိုအတည်ပြု
14 ဇူလိုင်လ 2006
positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကိုသုံးပြီး, သုတေသီများအလားအလာကုသမှုရွေးချယ်စရာအကြံပြုခြင်း, ကိုကင်းအလွဲသုံးစားနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်စွဲဖြစ်လာမယ့်အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်ကိုဓာတုဗေဒရိုနှင့်တစ်ဦးချင်း၏သဘောထားကိုအကြားခိုင်မာသည့်ဆက်သွယ်မှုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။
တိရစ္ဆာန်များတွင်သုတေသနပြုချက်အရကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းမပြုမီတိုင်းတာသည့် neurotransmitter dopamine အတွက် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတွင်ရှိသည့် receptor အရေအတွက်နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုပြသသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသတ္တဝါသည်မူးယစ်ဆေးကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ သုတေသနကိုလူ့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများ၏အကောင်းဆုံးစံပြဟုယူဆထားသည့်မျောက်များတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှုန်း dopamine receptors ၏ကနဦးနံပါတ်, မြင့်ယေဘုယျအားဖြင့်နိမ့်, အသုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသုတေသနမိုက်ကယ်အေ Nader, Ph.D ဘွဲ့ကို, ဆေးပညာ၏ဝိတ်သစ်တောတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာအဇီဝြဖစ်စဉ်များနှင့်ဆေးဝါးဗေဒပါမောက္ခကဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
ဒါဟာပြီးသားကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံး Non-အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နှစ်ဦးစလုံးသည်လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်ဘာသာရပ်များအတွက် D2 အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အထူးသဖြင့် dopamine အဲဒီ receptor ၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ကြောင်းလူသိများခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့ကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှတစ်ဦးချင်းစီ predisposed သို့မဟုတ်ကင်းအသုံးပြုမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်တစ်ဦး Pre-ရှိပြီးသားရိုခဲ့တာရှိမရှိမသိရခံခဲ့ရသည်။
Nader နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ယခုအပတ်တွင်အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသော Nature Neuroscience ဂျာနယ်တွင်ရေးသားထားသည်။ "ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကတော့ D2 အဲဒီ receptor level မှာ cocaine-induced လျော့နည်းသွားတာကြောင့်ပိုပြီးအားနည်းချက်ရှိတဲ့လူတွေက cocaine ကိုဆက်သုံးတာပိုများပါတယ်" ဟုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။
ဒါကတိရိစ္ဆာန်များကို အသုံးပြု. စတင်ခဲ့ပြီးမှကင်းတဲ့ D2 receptors ပြောင်းလဲမှုများအဲဒီအဆင့်ကိုနှိုင်းယှဉ်တစ်ခါမျှကြောင့်တိရိစ္ဆာန်များ၏အခြေခံ D2 အဆင့်ဆင့်တိုင်းတာရန်အစဉ်အဆက်ကပထမဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်ဒီလိုလူ့ဘာသာရပ်များနှင့်အတူမဖြစ်နိုင်ပါ, နှင့်ယခင်မျောက်သုတေသနတွင်, ကိုကင်းထိတွေ့တိရိစ္ဆာန်များ၏ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒအသုံးမပြုတဲ့ "ထိန်းချုပ်မှု" နဲ့သာနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါသုတေသနကိုလည်းစတင်သုံးစွဲဖို့ကွောငျးဖျောပွခဲ့ ကိုကင်းသည့် D2 အဆင့်ဆင့်ကိုသိသိသာသာကျဆင်းစေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ကောင်းစွာအခြေခံအောက်က D2 အဆင့်ဆင့်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
“ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီတွေ့ရှိချက်တွေဟာကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်မှုမှာ [dopamine] D2 receptors ရဲ့အခန်းကဏ္ for အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုဖြစ်ပြီး D2 receptors များတိုးပွားလာစေရန်ရည်ရွယ်သည့်ကုသနည်းများကမူးယစ်ဆေးဝါးဖြည့်စွက်ခြင်းလျော့နည်းစေရန်အတွက်ကတိပေးလိမ့်မယ်” ဟုသုတေသီများကရေးသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုကတိုးမြှင့် D2 receptors တိုးမြှင့် "ဆေးဝါး" သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချအဖြစ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အချက်များတိုးတက်စေခြင်းငှါပြုအံ့သောငှါအကြံပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုလေ့လာမှုက“ ကိုကင်းသုံးစွဲမှုအတွက်လက်တွေ့ကျသောထိရောက်သောကုထုံးများမရှိသေးပါ။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုအားနည်းခြင်း၏ဇီဝဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖျန်ဖြေသူများ၏နားလည်မှုမှာမလွယ်ကူသေးပါ။ ”
Dopamine သည်အခြား neurotransmitter များကဲ့သို့ ဦး နှောက်အတွင်းရှိအာရုံကြောဆဲလ်များအကြားရွေ့လျားမှုအချို့ကိုဖော်ပြရန်။ ၎င်းသည်အာရုံကြောဆဲလ်တစ်ခုမှထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီးနောက်အာရုံခံဆဲလ်တွင်ရှိသည့် receptors များက D2 အချို့ဖြစ်သည်။ အသုံးမပြုသည့် dopamine ကိုပို့ဆောင်ပေးသောဆဲလ်သို့ပြန်ပို့သော“ ပို့ဆောင်သူများ” တွင်စုဆောင်းသည်။
ကိုကင်းသည် Transporter သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်း၊ dopamine ၏“ ပြန်လည်သိမ်းယူခြင်း” ကိုပိတ်ဆို့ပြီးဆဲလ်များအကြားအာကာသထဲတွင်၎င်းကိုများများချန်ထားခြင်းဖြင့်လည်ပတ်သည်။ ၎င်းသည် dopamine အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့်သုံးစွဲသူကိုကိုကင်းမြင့်မားစေသည်ဟုယူဆရသည်။
သို့သော်ဤ dopamine အလွန်အကျွံပမာဏသည် D2 receptors များကိုလက်ခံသောဆဲလ်များသို့လွှမ်းမိုးသွားပြီးထိုဆဲလ်များသည်နောက်ဆုံးတွင် D2 receptor အရေအတွက်လျှော့ချခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုတေသီများကဤအပြောင်းအလဲသည်ကိုကင်းအားစွဲလမ်းမှုဖြစ်စေသည်ဟူသောယူဆချက်အားဖြင့်လက်ခံသူအဆင့်အတန်းကျဆင်းသွားပါကသုံးစွဲသူများအားပုံမှန်ဟုခံစားရရန် dopamine ပိုမိုလိုအပ်သည်။
ကိုကင်းအသုံးပြုသည်နည်းတူစိတ်ဖိစီးမှုသည်လည်း dopamine အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီး D2 receptors ကိုလျော့နည်းစေသည်။ Wake Forest မှ Nader အဖွဲ့၏အစောပိုင်းသုတေသနပြုချက်များအရစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုကင်းကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းတို့၏ဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုလည်းကင်းအသုံးပြုမှုကိုအဆုံးသတ်တစ်ချိန်က D2 receptors သာမန်အဆင့်ဆင့်ပြန်သွားဖို့အတှကျ ယူ. ကာလ၌ကွဲပြားမှုလေ့လာသည်။ တစ်ဦးတည်းသာရက်သတ္တပတ်အတွက်အသုံးပြုကြောင်းမျောက် D15 receptors အတွက်တစ်ခုသာ2ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့ချခဲ့ရပြီးသုံးပတ်အတွင်းလုံးဝရပြန်လေ၏။
သို့သော်တစ်နှစ်အတွက်အသုံးပြုကြောင်းမျောက် D21 receptors အတွက်2ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျှော့ချရေးပျမ်းမျှ။ သုံးလအတွင်းပြန်လည်ကောင်းမွန်သူတွေကိုမျောက်သုံးခု, ဒါပေမဲ့အဲဒီမျောက်နှစ်ခုနေဆဲ abstinence ၏တစ်နှစ်အကြာတွင်၎င်းတို့၏အခြေခံ D2 အဆင့်ဆင့်ထံသို့ ပြန်. မလာခဲ့သည်။
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုမရှိခြင်းသည်ကန ဦး အခြေခံ D2 အဆင့်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ လေ့လာမှုကအကြံပြုသည်မှာ“ အခြား neurotransmitter system များနှင့်ပါ ၀ င်သည့်အခြားအချက်များမှာ D2 receptor function ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်စေရန်လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ ”
လေ့လာမှု: မျောက်အတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။
Nader, MA, မော်ဂန်: D, Gage, HD, Nader SH, Calhoun TL,
Buchheimer N ကို, Ehrenkaufer R ကို, Mach RH အ။
နတ် neuroscience ။ 2006 သြဂုတ်;9(8): 1050-6 ။ EPub 2006 ဇူလိုင်9။
ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်ဆေးဝါးဗေဒဌာန, ဆေးပညာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၏သစ်တောတက္ကသိုလ်ကျောင်း Wake
မြစင်တာ Boulevard, Winston-လမ်, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား 27157, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
Dopamine neurotransmission ကင်းအလွဲသုံးစားမှုမှအဆင့်မြင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Positron ထုတ်လွှတ် tomography dopamine D12 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းအားဖြည့်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်နှင့်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ကင်းကနေ abstinence စဉ်အတွင်းဦးနှောက် dopaminergic function ကိုပြောင်းလဲလေ့လာဖို့လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်2စမ်းသပ်တာမျိုးမျောက်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ baseline D2 အဲဒီ receptor ရရှိမှုအဆိုးကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှုန်းထားများဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု Self-အုပ်ချုပ်ရေးစတင်များ 15 သီတင်းပတ်အတွင်း 20-1% အထိလျော့ကျခြင်းနှင့်ထိတွေ့မှု၏ 20 နှစ်အတွင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1% အထိလျှော့ချကျခံနေရပါသည်။ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်ရေရှည်လျှော့ချလျှောက်လျော့နည်းအချို့သောမျောက်များအတွက် abstinence ၏အထိ 1 တစ်နှစ်မွဲနှင့်အတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒေတာ D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းရန်ဓာတ်အဘို့သက်သေသာဓကများကိုပေးစွမ်းနဲ့ဦးနှောက် dopamine system ကိုလျင်မြန်စွာအောက်ပါကင်းထိတွေ့တုံ့ပြန်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ abstinence စဉ်အတွင်း D2 အဲဒီ receptor function ကို၏ပြန်လည်နာလန်ထူနှုန်းအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။